चिसोबाट जोगिन म’दिरा सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भने होसीयार ! – Tufan Media News
चिसोबाट जोगिन म’दिरा सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भने होसीयार !
२३ पुष २०७७, बिहीबार १३:४३
काठमाडौँ – अहिले जाडोको मौसम चलिरहेको छ । यो समयमा आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । यति तपाईं जाडो भगाउने बहानामा म’दिरा सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भने विचार गर्नुस् है । शरीर न्यानो बनाउने भन्दै म’द्यपान गर्नुलाई निकै जोखिम हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
धु’मपान र म’द्यपान गर्दा न्यानोको अनुभूति भएपनि त्यो भ्रम मात्र भएको चिकित्सक बताउँछन् । त्यतिमात्रै होईन चिकित्सकले खुलाएका छन्, ‘म’द्यपानका कारण शरीर चिसोचाहिँ हुन्छ, तातो होइन । यो भ्रम हो । त्यसैले यो मौसममा मद्यपान गरेर सुतेकाहरुको राति नै मृत्यु समेत भएका घटनाहरु समेत हामीले देखेका छौँ ।